အမေရိကန်က ကိုယ့်ဒူးကိုယ်ချွန်အမျိုးသမီး ဘီလီလျံနာကြီး Marian Ilitch
9 Oct 2017 . 6:09 PM
ကမ္ဘာ့သန်းကြွယ်သူဌေးကြီးတွေလို့ ပြောလိုက်ရင် ယောကျာ်းတွေပဲများပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုပြောပြမှာက အမျိုးသမီး ဘီလျံနာကြီးအကြောင်းပါ။
အမေရိကန် Michigan မှာ ပီဇာဆိုင်တွေဖွင့်ပြီး ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးချမ်းသာလာတဲ့ အမျိုးသမီးကြီးတစ်ဦးရှိပါတယ်။ သူမရဲ့နာမည်က Marian Ilitch ပါ။ သူမနဲ့သူမယောက်ျား Mike တို့ဟာ ၁၉၅၄ ခုနှစ်ကတည်းက ပီဇာဆိုင်စဖွင့်ခဲ့ပြီး အခုဆိုရင် ဆိုင်ခွဲအမြောက်အမြားရှိနေပြီးဖြစ်တာကြောင့် တစ်နှစ်ကို ဒေါ်လာ ၃ ဘီလီယံလောက်အထိ ဝင်ငွေရှိနေပါပြီ။
အခုဆိုရင် Ilitch ရဲ့အသားတင်ပိုင်ဆိုင်မှုတန်ဖိုးဟာ ဒေါ်လာ ၅.၁ ဘီလီယံအထိ ရှိနေတာကြောင့် Forbes မဂ္ဂဇင်းက ဒီအပတ်ထုတ်ပြန်တဲ့ ကိုယ့်ဒူးကိုယ်ချွန် အချမ်းသာဆုံးအမေရိကန်အမျိုးသမီးစာရင်းမှာ ထိပ်ဆုံးကပါဝင်လာပါတယ်။
ဒီစာရင်းမှာ နည်းပညာ၊ လက်လီအရောင်းကဏ္ဍ၊ ဖျော်ဖြေရေး၊ အသင့်စားအစားအစာ နဲ့ ဖက်ရှင် လုပ်ငန်းတွေနဲ့ ချမ်းသာကြွယ်ဝလာတဲ့ အမျိုးသမီးတွေလည်းပါဝင်လာခဲ့ပေမယ့် Walmart ကနာမည်ကြီး Alice Walton နဲ့ Laurene Powell Jobs တို့ကိုတော့ ဒီစာရင်းမှာ ထည့်သွင်းထားခြင်းမရှိပါဘူး။ သူတို့ရဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုက အမွေရထားတာတွေပါလို့ပါ။
ခုထုတ်ပြန်တဲ့စာရင်းမှာ ကိုယ့်ဒူးကိုယ်ချွန်အမျိုးသမီးဘီလျံနာတွေ ၁၈ ယောက်အထိရှိလာတာကြောင့် ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကထက်စာရင် ပိုမိုများပြားလာပါတယ်။ ထိပ်ဆုံးဆယ်ယောက်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုက အနည်းဆုံးဒေါ်လာ ၂ ဘီလီယံအထိ ရှိပါတယ်။ ABC Supply ကို တွဲဖက်တည်ထောင်သူနဲ့ ဥက္ကဌဖြစ်တဲ့ Diane Hendricks ကတော့ ဒေါ်လာ ၄.၉ ဘီလီယံနဲ့ ဒုတိယနေရာမှာရှိနေပြီး တတိယနေရာမှာတော့ ဓာတ်ဆီဆိုင်နဲ့ ကုန်စုံဆိုင်အများအပြားပိုင်ဆိုင်တဲ့ Judy Love ကတော့ တတိယနေရာမှာပါ။ ဖျော်ဖြေရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ နာမည်ကြီးတဲ့ Oprah Winfrey ကလည်း ပိုင်ဆိုင်မှု ၂.၉ ဘီလီယံနဲ့ တတိယနေရာမှာ ပူးတွဲရပ်တည်နေပါတယ်။
ထိပ်ဆုံး ၁၀ ယောက်မှာပါဝင်တဲ့သူ တခြားသူတွေကတော့ Gap ကို တွဲဖက်တည်ထောင်သူ Doris Fisher (၂.၆ ဘီလီယံ) ၊ Epic Systems ရဲ့တည်ထောင်သူနဲ့ CEO Judy Faulkner (၂.၅ ဘီလီယံ) ၊ Hewlett-Packard ရဲ့ CEO Meg Whitman (ဒေါ်လာ ၂.၅ ဘီလီယံ) ၊ ကုန်တင်ယာဉ် စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင် Johnelle Hunt (ဒေါ်လာ ၂.၃ ဘီလီယံ)၊ ကာစီနိုလုပ်ငန်းပိုင်ရှင် Elaine Wynn (ဒေါ်လာ ၂.၁ ဘီလီယံ) နဲ့ Lynda Resnick (ဒေါ်လာ ၂ ဘီလီယံ) တို့ပါ။
Facebook ရဲ့ COO ဖြစ်၊ စာရေးဆရာမလည်းဖြစ်တဲ့ Sheryl Sandberg နဲ့ Spanx ရဲ့တည်ထောင်သူ Sara Blakely တို့ကလည်း ပိုင်ဆိုင်မှု ဒေါ်လာ ၁.၆ ဘီလီယံ၊ ၁.၁ ဘီလီယံစာရင်းနဲ့ ဒီစာရင်းမှာပါဝင်လာပါတယ်။
Taylor Swift ကတော့ Forbes ရဲ့စာရင်းမှာ အငယ်ဆုံးဖြစ်ပြီး Alice Schwartz ကတော့ အသက် ၉၀ နဲ့ အကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
Ref: www.time.com, www.forbes.com
အမရေိကနျက ကိုယျ့ဒူးကိုယျခြှနျအမြိုးသမီး ဘီလီလြံနာကွီး Marian Ilitch
ကမ်ဘာ့သနျးကွှယျသူဌေးကွီးတှလေို့ ပွောလိုကျရငျ ယောကျြားတှပေဲမြားပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အခုပွောပွမှာက အမြိုးသမီး ဘီလံနြာကွီးအကွောငျးပါ။
အမရေိကနျ Michigan မှာ ပီဇာဆိုငျတှဖှေငျ့ပွီး ကိုယျ့အားကိုယျကိုးခမျြးသာလာတဲ့ အမြိုးသမီးကွီးတဈဦးရှိပါတယျ။ သူမရဲ့နာမညျက Marian Ilitch ပါ။ သူမနဲ့သူမယောကျြား Mike တို့ဟာ ၁၉၅၄ ခုနှဈကတညျးက ပီဇာဆိုငျစဖှငျ့ခဲ့ပွီး အခုဆိုရငျ ဆိုငျခှဲအမွောကျအမွားရှိနပွေီးဖွဈတာကွောငျ့ တဈနှဈကို ဒျေါလာ ၃ ဘီလီယံလောကျအထိ ဝငျငှရှေိနပေါပွီ။
အခုဆိုရငျ Ilitch ရဲ့အသားတငျပိုငျဆိုငျမှုတနျဖိုးဟာ ဒျေါလာ ၅.၁ ဘီလီယံအထိ ရှိနတောကွောငျ့ Forbes မဂ်ဂဇငျးက ဒီအပတျထုတျပွနျတဲ့ ကိုယျ့ဒူးကိုယျခြှနျ အခမျြးသာဆုံးအမရေိကနျအမြိုးသမီးစာရငျးမှာ ထိပျဆုံးကပါဝငျလာပါတယျ။
ဒီစာရငျးမှာ နညျးပညာ၊ လကျလီအရောငျးကဏ်ဍ၊ ဖြျောဖွရေေး၊ အသငျ့စားအစားအစာ နဲ့ ဖကျရှငျ လုပျငနျးတှနေဲ့ ခမျြးသာကွှယျဝလာတဲ့ အမြိုးသမီးတှလေညျးပါဝငျလာခဲ့ပမေယျ့ Walmart ကနာမညျကွီး Alice Walton နဲ့ Laurene Powell Jobs တို့ကိုတော့ ဒီစာရငျးမှာ ထညျ့သှငျးထားခွငျးမရှိပါဘူး။ သူတို့ရဲ့ခမျြးသာကွှယျဝမှုက အမှရေထားတာတှပေါလို့ပါ။
ခုထုတျပွနျတဲ့စာရငျးမှာ ကိုယျ့ဒူးကိုယျခြှနျအမြိုးသမီးဘီလြံနာတှေ ၁၈ ယောကျအထိရှိလာတာကွောငျ့ ပွီးခဲ့တဲ့နှဈကထကျစာရငျ ပိုမိုမြားပွားလာပါတယျ။ ထိပျဆုံးဆယျယောကျရဲ့ပိုငျဆိုငျမှုက အနညျးဆုံးဒျေါလာ ၂ ဘီလီယံအထိ ရှိပါတယျ။ ABC Supply ကို တှဲဖကျတညျထောငျသူနဲ့ ဥက်ကဌဖွဈတဲ့ Diane Hendricks ကတော့ ဒျေါလာ ၄.၉ ဘီလီယံနဲ့ ဒုတိယနရောမှာရှိနပွေီး တတိယနရောမှာတော့ ဓာတျဆီဆိုငျနဲ့ ကုနျစုံဆိုငျအမြားအပွားပိုငျဆိုငျတဲ့ Judy Love ကတော့ တတိယနရောမှာပါ။ ဖြျောဖွရေေးလုပျငနျးတှမှော နာမညျကွီးတဲ့ Oprah Winfrey ကလညျး ပိုငျဆိုငျမှု ၂.၉ ဘီလီယံနဲ့ တတိယနရောမှာ ပူးတှဲရပျတညျနပေါတယျ။
ထိပျဆုံး ၁၀ ယောကျမှာပါဝငျတဲ့သူ တခွားသူတှကေတော့ Gap ကို တှဲဖကျတညျထောငျသူ Doris Fisher (၂.၆ ဘီလီယံ) ၊ Epic Systems ရဲ့တညျထောငျသူနဲ့ CEO Judy Faulkner (၂.၅ ဘီလီယံ) ၊ Hewlett-Packard ရဲ့ CEO Meg Whitman (ဒျေါလာ ၂.၅ ဘီလီယံ) ၊ ကုနျတငျယာဉျ စှနျ့ဦးတီထှငျလုပျငနျးရှငျ Johnelle Hunt (ဒျေါလာ ၂.၃ ဘီလီယံ)၊ ကာစီနိုလုပျငနျးပိုငျရှငျ Elaine Wynn (ဒျေါလာ ၂.၁ ဘီလီယံ) နဲ့ Lynda Resnick (ဒျေါလာ ၂ ဘီလီယံ) တို့ပါ။
Facebook ရဲ့ COO ဖွဈ၊ စာရေးဆရာမလညျးဖွဈတဲ့ Sheryl Sandberg နဲ့ Spanx ရဲ့တညျထောငျသူ Sara Blakely တို့ကလညျး ပိုငျဆိုငျမှု ဒျေါလာ ၁.၆ ဘီလီယံ၊ ၁.၁ ဘီလီယံစာရငျးနဲ့ ဒီစာရငျးမှာပါဝငျလာပါတယျ။
Taylor Swift ကတော့ Forbes ရဲ့စာရငျးမှာ အငယျဆုံးဖွဈပွီး Alice Schwartz ကတော့ အသကျ ၉၀ နဲ့ အကွီးဆုံးဖွဈပါတယျ။
by 2B . 24 hours ago